Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomalaiya oo la kulmay Guddiga barista dadkii lagu laayay Galgaduud – Somali Top News
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomalaiya oo la kulmay Guddiga barista dadkii lagu laayay Galgaduud
Guddoomiyaha golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa la kulmay guddi xaqiiq raadin ah ee uu soo magcaabey Madaxweynaha koofur Galbeed Cabdicasiis (lafta gareen).
Guddigan ayaa loo xilsaaray iney soo baaraan dhibaatadii ka dhacadey magaalooyinka dhuusamareeb iyo gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug taas oo lagu laayey dad shacab ah oo aan waxba galabsan.
Gudigaan oo uu horkacayey wasiirka wasaaradda cadaaladda oo ay ka mid yihiin xildhibaano ,salaadiin iyo malaaqyo oo ka soo jeedo kofur galbeed, ayaa Gudoomiye Mursal siiay xoggo ku saabsan sida ay doonayaan iney u wajahaan Kiiskan.
Ciidamada amaanka Galmudug ayaa wali magaalooyinka Gaalkacyo iyo Dhuusa-Mareeb ka wada howlgallo ay ku baadi goobayaan Kooxihii ka danbeeyay dilalka loo geystay ku dhowaad 20-ka qof ee ka soo jeeday deegaanada Koofur Galbeed, iyadoo laamaha amaanka ay qabteen qaar kamid ah eedeysanayaasha.
← 4 arrested following migrant boat tragedy
Protecting Somali minorities is good military strategy →
Taliyaha AFRICOM ee Mareykanka oo xilka isaga dagaya kana hadlay duqeymaha Al shabaab
Erdogan oo ka hadlay Labo wajiilinimada Reer Galbeedka iyo Daacishta la sheegay iney baxsatay